Nezvedu - Hangzhou Mankaleilab Automotive Components Co, Ltd.
HangZhou Mankaleilab Automotive Components Co, Ltd. (Mankaleilab, inonzi "MaiKaiLa" kana "MKL") ingangoita yekutanga uye nyanzvi BMW yakateedzana auto yekushandura kambani muChina. Wakautangira ndiMarkella mota modification studio, yakavambwa muna 2007.
Mankaleilab akapedza shanduko yese uye akanyoreswa munaNovember 17, 2015, neguta rakanyoreswa remamiriyoni mashanu emau uye dzimbahwe rayo muHangzhou, China.
Kubva pakagadzwa makore mashanu apfuura, Mankaleilab agara achipa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, rutsigiro rwakakwana rwehunyanzvi uye kurira mushure mekutengesa sevhisi. Bhizimusi hombe reBMW zvese-zvakateedzana zvemukati zvishongedzo, zvishongedzo kit kuchinjiswa uye zvimwe zvekuita zvikamu zvinoshandurwa, izvo zvoga-zvakagadzira uye zvinogadzira chiutsi sisitimu yekushandura zvikamu uye kristaro akateedzana makiti akaverengerwa mune akawanda anozivikanwa epamba uye ekunze masuo uye anodiwa zvakanyanya ne mota inoshandura vanofarira, Mankaleilab ine yakasimba R & D simba uye ine akawanda zvigadzirwa patent.
Mankaleilab iri kuramba ichikurudzira hunyanzvi uye shanduko yemabhizinesi, uye yakazvipira kuve kambani ine rakakurumbira bhizinesi hombe, kusimudzira kwakasiyana, kushanda kwepasirese, uye mubatanidzwa wekugadzira nekutengesa.
PASI PASI PASI PEDU NZVIMBO DZENYAYA
Mankaleilab inotarisa mukuumba mukurumbira wepasi rose uye kukwikwidza kwepasirese, uye nekutora chikamu mumakwikwi epasi rese emusika, kunatsa kunosimbisa hutano hwekudzamisa shanduko.
Mankaleilab haina kungozvimiririra yakagadzira zvigadzirwa zvakawanda, asi zvakare vakatengesa zvigadzirwa kune nyika dzakasiyana. China yepamhepo yekutengesa chiteshi inovhara ese ekutanga-tier maguta ane vangangoita mazana matunhu anogovera nepo online yekutengesa nzira, Mankaleilab akabudirira kugara muTaobao, Tmall, Tiktok, WeChat App, uye yega-inoshanda e-commerce Platform, AliExpress, Alibaba, DHgate.com, JD Overseas Station, eBay, Amazon uye mamwe akawanda e-commerce mapuratifomu. . Nhasi Mankaleilab anokwikwidza pasi rose kushandira vatengi ava, zvisinei nekuti vari kupi.
ZVAKAPARIDZISWA ZVINOGONESESA ZVEMAHARA
Parizvino, Mankaleilab iri kunyanya kuita auto auto kit, mweya grille, vhiri rim, chiutsi, tailpipe, kuturika, sopiler, epakutanga auto zvikamu, zvemukati zvemukati zvikamu uye zvekunze zvikamu, nezvimwe, kuti uwane yakazara chigadzirwa dhizaini, kuve nechokwadi iyo nhanho yekuchinja kwehupfumi uye kukura kwakasimba kwebhizinesi.
ANOKOSHESWA MUDZIMAI WENYIKA
Mukuita kwekugadzwa kwepasirese uye kusimudzira, Mankaleilab atora chikamu chakadzama mukuvandudza mashandiro emafekitori emubatanidzwa pamwe nemarabhoritari kumatunhu mazhinji, ruzhinji rwevanhu nerubatsiro, izvo zvakaita basa rakanaka mukusimudzira hupfumi hwemaguta emuno, kuwedzera kwemitero uye mabasa, Yakave yakasimbiswa zvizere uye inogamuchirwa nevaparidzi muChina nekune dzimwe nyika, uye yakagadzira yakakosha mukurumbira wepasi rose wechiratidzo.
Kutarisana neinoshanduka "nyowani yakajairika" yemusika wepasi rose nehupfumi, Mankaleilab ane nzira refu yekufamba. Achiomerera kumutsara mukuru wehunyanzvi uye shanduko, ichibatanidza misika yepamba neyekunze, uye kushandisa nzira mbiri dzekutungamira kwemaindasitiri nekutungamira kwemari, Mankaleilab akazvipira kuzvipokana zvakare neushingi hwakakura, kuita bhizinesi nekukura kwakasimba, zvakanakira mabhenefiti, kushanda kwepasirese , kusimudzira kwakasiyana siyana, kuenderera kwehunyanzvi uye kutungamira nguva, uye nekunyatsopedzisa shanduko huru kubva ku "China Mankaleilab" kuenda ku "World Mankaleilab".
Pasi pemhepo yekudyidzana kwepasi rose, isu tinoomerera pakutsvaga nzira nyowani dzemabhizinesi eChina nenzira ye "yakazvimirira manejimendi", uye tichiratidza nemabatiro akabudirira kuti zvigadzirwa zveChinese zvine simba rekupinda nekudzika midzi mumusika wepasi rose.
Pakutanga kwa2019, Mankaleilab akapaza nepfungwa yemiganhu yenyika uye, neimwe nzira, akasiya zvachose pfungwa yemabhizimusi emunyika nekune dzimwe nyika, misika yenyika neyekunze, vachibata musika wepasi seyuniti yakabatana yehupfumi, ichitora musimboti wevamwe zvinhu zvemusanganiswa wekushambadzira, uye mukana wekukwikwidza weyakajairika mashandiro akaumbwa nekupinda kwehuwandu hwakawanda hwemari mumusika munguva pfupi, vachitengesa angangoita mamirioni makumi mana emitero gore rese.
Muna 2020, nekuda kwe COVID-19, zvigadzirwa zvepasi rose zvakatadza kuendesa zvakajairika. Mankaleilab akafunga nezve kusarudzwa kwemikana yemisika pasirese, akagadzira chirongwa chitsva chekushambadzira uye akagovera zviwanikwa zvekushambadzira. Kubudikidza nekusimudzirwa kwemusika wepamusha, angangoita mamirioni gumi nematatu eRMB yekutengesa yatengeswa mukota yekutanga.
Muna 2019, Mankaleilab akapinda muchirongwa cheGT anoratidza kushandurwa kwepasirese show uye Frankfurt auto zvikamu zvekuratidzira, uye akabudirira kuita bhizimusi kubatana pamwe nevamiriri vanoverengeka muUnited States. Muna 2020, pamusoro pekuenderera mberi kutora chikamu muGT show yepasi rose modification show uye Frankfurt auto zvikamu zvekuratidzira, yakabatanawo nezvikwata zviri kutora chikamu muZheJiang redunhu repasi rese.
Fonera KANA KUSHANYIRA
Muvhuro-- Chishanu: 9:00 AM-6: 00 PM
Mugovera neSvondo: 10:00 AM - 7:00 PM
TEL: +86 (571) 89812919; Runhare: +86 18888958066.
Kero: 395 Tongyun Street, Yuhang Dunhu, Hangzhou, Zhejiang, China.